Besarety Nosamborina ilay Afrikana namaly polisy
Mbola naneso sy nanohitra ihany ka nentina nanaovana fanadihadiana Tera-tany Afrikana iray no hitan'ny polisin'ny boriborintany fahatelo tsy nanao arotava tesy Besarety.
Toy ny Malagasy mandika lalàna rehetra dia am-panajana tanteraka no nanentanana ity tera-tany vahiny ity hanao aron-tava sy hanao ny asa iombonana ho setrin'ny tsy fanarahan-dalàna nataony. Tabataba sy fanesoana ireo polisy ary nanohatra ilay famafana lalàna no nataon'ilay tera-tany vahiny. Voatery nitondra azy ho eny amin'ny kaomisarian’ ny polisy noho izany ny mpitandro ny filaminana noho izy tsy manaiky ny asa nasaina nataony. Tsy nanaiky izany ihany koa ity lehilahy ity ka nampiasa ny heriny manoloana ireo polisy hitondra azy ka tsy maintsy nofehezina izy manoloana ny herisetra nasehony tamin'ireo mpitandron'ny filaminana. Ny lalàna dia tsy natao hanavahana fa natao ho an'ireo olona rehetra miasa sy monina eto Madagasikara. Noho izany dia handraisana fepetra avokoa ireo izay minia mandika izany mba ho fiarovana ny ain'ny vahoaka Malagasy manoloana ny fiparitahan'ilay valanaretina Covid-19.